သင့်ကလေးကို HPV ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၆) ခု - Hello Sayarwon
Dr. Thurein Hlaing Win မှ ရေးသားသည်။ 18/10/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
(၁) HPV ကအဖြစ်များပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးမထားရင် ဘဝတစ်သက်တာမှာ တချိန်ချိန်တော့ HPV ကူးစက်ခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်က အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်းမှာရှိနိုင်ပါတယ်။ Human papillomavirus (HPV) ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လိင်ဆက်ဆံမှု သို့မဟုတ် အရေပြားချင်းထိတွေ့မှုမှတဆင့် ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုများပါတယ်။
HPV ကူးစက်မှုအများစုက သူ့အလိုလိုသက်သာပျောက်ကင်းသွားမှာဖြစ်ပေမယ့် ပျောက်မသွားတဲ့အခါမျိုးကျ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ကင်ဆာရောဂါေတွဖြစ်လာစေပါတယ်။ HPV က –
အမျိုးသမီးတွေမှာ မိန်းမကိုယ်လမ်းကြောင်းကင်ဆာ၊ သားအိမ်ခေါင်းနဲ့ မိန်းမကိုယ်နှုတ်ခမ်းသားကင်ဆာ၊
အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးမှာ စအိုနဲ့ လည်ချောင်းအနောက်ဘက်( လျှာနဲ့ပသိ အရင်းနား)ကင်ဆာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
(၂) HPV ကာကွယ်ဆေးက ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ရောဂါကူးစက်မှုတွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
HPV ကာကွယ်ဆေးကို စတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကတည်းက HPV ကူးစက်မှုနှုန်းကသိသိသာသာ လျော့ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ ကင်ဆာတွေနဲ့ လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ေတွဖြစ်စေနိုင်တဲ့ HPV အမျိုးအစားတွေကူးစက်မှုဟာ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေမှာ ၇၁%လောက်လျော့သွားခဲ့ပါတယ်။
(၃) HPV ကာကွယ်ဆေးက ကင်ဆာကာကွယ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ HPV ကူးစက်ခံရသူ သန်း ၆၃၀ လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ HPV ကာကွယ်ဆေးက ကင်ဆာတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကူးစက်မှုတွေကိုတားဆီးပေးပြီး ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကို ၉၀% (၃၀၀၀၀)ကျော် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
(၄) သင့်ကလေးကို HPV ကာကွယ်ဆေး အခုထိုးပေးတာက နောက်ပိုင်း HPV ကင်ဆာဖြစ်လာမှ ကုသတာထက် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေက သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပေးနေပေမယ့် အမေရိကန်မှာဆိုရင် HPV ကူးစက်မှုကြောင့်ကင်ဆြာဖစ်ပွားရသူ အယောက် ၂၀၀၀၀ လောက်မှာ ကင်ဆာစစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်ထားတာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။
HPV ကာကွယ်ဆေးက ဒီကင်ဆာတွေဖြစ်မလာအောင် ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။
(၅) အသက် ၁၁နှစ်- ၁၂ နှစ်ကလေးတွေကို ဦးနှောက်အမြှေးရောင်၊ HPV ကင်ဆာတွေနဲ့ ကြက်ညှာချောင်းဆိုးရောဂါတွေအတွက် ကာကွယ်ဆေးသုံးမျိုးထိုးပေးသင့်ပါတယ်။စာသင်နှစ်အတွင်း အားကစားပိုင်းဆရာဝန် သို့မဟုတ် နှစ်စဉ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတို့ အပါအဝင် ဆရာဝန်ဆီရောက်တိုင်း သင့်ကလေးအတွက် ကာကွယ်ဆေးအကြံပြုချက်တွေရယူပါ။
(၆) ကလေးကို အသက် ၁၁နှစ်-၁၂နှစ်အရွယ်မှာ HPV ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးပြီး ကင်ဆာအန္တရာယ်ကနေ ဘေးကင်းစိတ်ချရပြီး တာရှည်စွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးနေကြတဲ့ ဆေးအမျိုးအစားသန်းပေါင်းများစွာထဲမှာ HPV ကာကွယ်ဆေးဟာ ဘေးကင်းစိတ်ချရတာသေချာတယ်လို့ ၁၀ နှစ်ကြာလေ့လာခဲ့တဲ့သုတေသနအရ သိရပါတယ်။
တခြားကာကွယ်ဆေး၊ ဆေးဝါးတွေလိုပဲ HPV ကာကွယ်ဆေးမှာလည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်များဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက အပျော့စားဖြစ်ပြီး ဆေးထိုးထားတဲ့နေရာမှာ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ အရေပြားနီမြန်းခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ မူးမေ့ခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်းနဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းတို့ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဆေးထိုးပြီးနောက်ပိုင်း မူးမေ့ခြင်းဟာ HPV ကာကွယ်ဆေးအပါအဝင် ကာကွယ်ဆေးတိုင်းအတွက် ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပါတယ်။
မူးမေ့ခြင်းနဲ့ မူးလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းေတွမဖြစ်ရအောင် ဆယ်ကျော်သက်တွေကို ဆေးထိုးပြီးတာနဲ့ ခဏထိုင်နေစေ ဒါမှမဟုတ် လှဲနေစေတာမျိုး ဆေးထိုးပြီး ၁၅ မိနစ်လောက်ကို နေရာမရွှေ့ဘဲဆက်နေခိုင်းသင့်ပါတယ်။ HPVကာကွယ်ဆေးဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်တာထက် ကောင်းကျိုးပဲ ပိုများပါတယ်။
Your Child’s Immunizations: Human Papillomavirus (HPV) Vaccine.
https://kidshealth.org/en/parents/hpv-vaccine.html Accessed February 27, 2018.
How effectives are HPV vaccines
Accessed February 27, 2018
https://www.cdc.gov/features/hpvvaccineboys/index.html Accessed February 27, 2018.
Empowering Children With Healthy Self-Esteem
https://www.webmd.com/children/vaccines/default.htm Accessed February 27, 2018